Rita July 19, 2009 at 11:50 AM
မနေ့ကပဲ "အ၀ါရောင်လမ်းကလေး" သီချင်းကို နားထောင်နေမိသေးတာ။
မေဇင် July 19, 2009 at 11:53 AM
ဘယ်နေရာလေး လဲဟင်...မမသက်ဝေ... ?
PAUK July 19, 2009 at 11:57 AM
Anonymous July 19, 2009 at 12:25 PM
အသစ်မှာ အဆင်ပြေပါစေ မမသက်ဝေ။
khin oo may July 19, 2009 at 1:16 PM
kom: သက်ဝေ ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာလဲ။
sonata-cantata July 19, 2009 at 9:15 PM
ပေါက် ထုံတာတမျိုး၊ ဒီက ထုံတာတမျိုး...
myatnoe July 19, 2009 at 9:58 PM
အမ ဂျပန်ကိုလားးး ဟီးး
khin oo may July 20, 2009 at 12:30 AM
20 Jul 09, 00:30
Gypsy(Homeless) July 20, 2009 at 5:01 AM
Who's moving whom, Who's been taken out of care having to move toanew? who's care..
Challenges in moving toward...
Just copy the moving company's advertising.. :)
U'veapeace and nice...new days new life and new Home.... :)
myo July 20, 2009 at 9:48 AM
" ဒီလိုသံယောဇဉ်တွေ ဖြတ်ဖို့ ခက်တယ်လေ..."
ရေစီးကြောင်းသံယောဇဉ် ထဲက စာသားလေးတွေ သတိရသွားတယ်..။
P.Ti July 20, 2009 at 2:51 PM
အမသက်ဝေ တကယ်ပြောင်းတော့မှာလား... :(
မြစ်ကျိုးအင်း July 21, 2009 at 9:19 AM
ဘယ်ပြောင်းမလဲတော့မသိဘူး ..အခုဘယ်မှာနေမှန်း လည်းမသိပါဘူး...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါစေဗျာ
Moe Cho Thinn July 22, 2009 at 1:59 AM
ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့ နေရာ ဒေသ၊ လူ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ခွဲခွာရရင် နာကြင်ရတာပါပဲ။
မမ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
pandora July 23, 2009 at 9:05 PM
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တိမ်ပြာပြာနေ့တနေ့ ဆန်းဒေးမှာ တွေ့ကြတာပေါ့။
တန်ခူး July 25, 2009 at 8:43 AM
အဲဒီနေရာလေးက ဒီလိုနိုင်ငံမှာ တကယ့်ကို ရှားရှားပါးပါး သာသာယာယာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလေးမို့လွမ်းလဲလွမ်းလောက်စရာပေါ့သက်ဝေရေ... ဟိုနေရာလေးကိုရောက်ရင်လဲ ကြာလာတော့ နေသားကျ ပျော်ရွှင်သွားမှာပါ....
Hmoo July 25, 2009 at 9:46 PM
Life means moving and travelling...
U should B BZ and happy :)
သီဟသစ် July 26, 2009 at 12:52 AM
နေရာလေးတိုင်းမှာ အမှတ်တရတွေ အများကြီးရှိတယ်နော်
သက်ဝေ July 27, 2009 at 11:51 AM
အမှတ်ရစရာ နေရာလေးတခုကတော့ လွမ်းစရာလေးတွေနဲ့ အတူတူ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ သတိရတိုင်းတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ သွားကြည့်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလေး ရှိနေသေးတာမို့ စိတ်ထဲမှာ နဲနဲတော့ သက်သာရာရမိပါတယ်...။
ကိုယ်ရေးထားတာဖတ်ပြီး စဉ်းစားတွေးတောရင်း မှတ်ချက်ရေးသွားကြသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။